News 18 Nepal || निगमले फेरि बढायो पट्रोलियम पदार्थको मूल्य
निगमले फेरि बढायो पट्रोलियम पदार्थको मूल्य
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि पनि बृद्धि गरेको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निमगले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल आन्तरिक हवाई इन्धनको भाउ लिटरमा दुई रुपैयाँको दरले बढाइएको जानकारी दिएको हो ।
नयाँ मूल्यसुची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १४ रुपैयाँ पुगेको डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ९७ रुपैयाँ आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य ६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ ।
निगमले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजलमा ४ रुपैयाँ १३ पैसा र ग्यासमा २ सय ८५ रुपैयाँ ८३ पैसा घाटा बेहोर्नुपरेको र मट्टितेलमा भने निगम नाफामा रहेको उल्लेख गरेको छ । नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई १५ दिनमा ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ घाटा भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।
भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार नाफा अझै चुलिने भएपछि तेलको मूल्य बढाए निमगले स्पष्टीकरण दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा चेलको भाउ बढेर घाटा चुलिएकाले मूल्य समायोजन गर्नु निगमको दाबी छ ।
यसअघि आयल निगमले माघ २८ गते बुधबार पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनको १ फेब्रुअरीको मूल्यको आधारमा माघ २८ गते र १६ फेब्रुअरीको मूल्यको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
विद्युतीय कारोबारको सीमा बढ्यो, अब दैनिक कति गर्न पाइन्छ ?
तोलाको कति पुग्यो सुन चाँदीको मूल्य ?
सर्लाहीमा १५ करोड बढीको गोलभेँडा उत्पादन
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो ?
भारतले फेरि पठायो नयाँ मूल्य, नेपालमा बढ्ला मूल्य ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार : ९ सय पर्ने सेनिटाइजर ३५ सयमा खरिद
प्रतिनिधिसभाका सांसदले ‘विघटित अवधि’को सबै तलब भत्ता पाउने
सरकारको ऋण बढ्यो, हरेक नेपालीको थाप्लोमा कति ?
फागुन २० गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
माधव नेपालले भने, ‘ओलीसँग फेरि सहकार्य हुन सक्छ’
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको कारवाहीपछि यसो भन्छिन् शान्ता चौधरी
आलमको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा, देउवाको छुटाउने योजना
भारत खुसी हुने अभिव्यक्ति बारे यसो भन्छन् प्रचण्ड
अब त्रिविका हरेक परीक्षा सीसी क्यामेराको निगरानीमा हुने
सभापति देउवा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आए पछि हट्दिनँ’